နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၂ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၄ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ ဇမ္ဗူသီရိခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နေပြည်တော် - မတ် ၁၂ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အန်တိုနီနို မားကွတ်စ် ပေါ်တို ဦးဆောင်သော ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများအား လက်ခံတွေဆုံ။
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၈ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဒိန်းမတ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Mogens Lykketoft ဦးဆောင်သည့်‌ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များသည် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
နေပြည်တော် - မတ် ၈ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ(USAID) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Dr. Rajeev Janardan Shah ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် - မတ် ၁၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည့် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ လီကျွင်းဟွာသည် ယနေ့ညနေ(၄)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လာရောက် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်သည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း နှင့်အတူ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသည့် ဦးသိန်းဆွေ၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဦးလှမြင့်ဦး နှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။(သတင်းစဉ်)
နေပြည်တော် - ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား Hanns Seidel Foundation (HSF) မှ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Mr. Christian Hegemer ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည် (၂း၅၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I - 1) ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms.Tami Overby ဦးဆောင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် (၉) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။